Xukuumadda Somaliland Oo Abaal-marino Gudoonsiiyay Gudida Qaadhaan- Bixiyayaasha Beesha Caalamka Ee Taageera Geedi-socodka Dumuqraadiyada – Araweelo News Network (Archive)
Xukuumadda Somaliland Oo Abaal-marino Gudoonsiiyay Gudida Qaadhaan- Bixiyayaasha Beesha Caalamka Ee Taageera Geedi-socodka Dumuqraadiyada
Hargeysa(ANN)Madaxweyne ku-xigeeenka Somaliland C/raxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta xadhiga ka jaray dhisme cusweyn oo laga hirgeliyay xarunta Komishanka doorashooyinka Somaliland oo ka kooban sadex dabaq.Xaflad loo
sameeyay furitaanka dhismahaa oo lagu qabtay goobta laga sameeyay ee Komishanka doorashooyinka Qaranka Somaliland ee Duleedka Huteelka Imperial, waxa kasoo qaybgalay Gudoomiyaha Wakiilada Somaliland, Gudoomiyaha Komishanka iyo xubna kale , Wasiiradda Maaliyadda, Wasiirka warfaafinta, xubno wakiilo ka socday Gudida Somaliland ka taageera kobcinta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka.
Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland C/raxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), oo ka hadlay furitaankii xafladaa, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in dhisme weyn loo dhiso Gudida doorashooyinka qaranka oo uu tilmaamay inay shaqo xasaasi ah u hayaan qaranka.
Wuxuuna sheegay inay xukuumaddiisu kala shaqaynayso Komishanka sidii loo qaban lahaa doorashooyinka Goleyaasha deegaanka oo ay gacan ka geysan doonaan xukuumad ahaan.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan Saylici ayaa u mahad celiyay qaadhaan bixiyeyaasha Somaliland ka taageera horumarinta dimuqraadiyadda, waxaanu u soo jeediyay inay sii wadaan taageeradooda la xidhiidha kobcinta dimuqraadiyadda.
Sidoo kale waxa halkaa ka hadlay Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland Ciise Yuusuf X. Maxamed (Xamari) oo tafaasiil ka bixiyay qorshaha doorashooyinka dalka iyo waxqabadkii Komishanka ee mudadii ay shaqaynayeen, isagoo yidhi, “Anagu mudadii aanu shaqaynaynay, waxaanu ku dedaalaynay inaanu ummadda wax anfaca uga tagno, markaa dhismahani wuxuu ka mid yahay waxyaabihii aanu ku guulaysanay intii aanu joognay.”
Mr. Ciise Xamari, wuxuu intaa ku daray, “Waxaanan odhan karaa weelkii aynu wax ku shubaynay waynu haynaa, laakiin waxa loo baahan yahay wixii lagu tayayn lahaa, haddii ay shaqaale noqoto iyo haddii ay qalabayn noqotaba,” wuxuuna xusay inay diyaarinayaan oo ay ku gudo-jiraan qorshayntii iyo qaabkii loo agaasimi lahaa doorashooyinka Goleyaasha deegaanka ee lagu wado inay dalka ka qabsoomaan dabayaaqadda sanadkan 2012-ka.
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland wuxuu u mahad celiyay qaadhaan-bixiyeyaasha Somaliland ka taageera geedi socodka dimuqraadiyadda oo ay ka mid yihiin Maraykanka, SWEDEN, UK, SWIZERLAND, Midowga Yurub, Denmark iyo NORWAY. Dhinaca kalena waxa uu xusay inay kaalin ka qaateen hirgelinta dhismahaa jaaliyadaha Somaliland ee ku dhaqan dalka dibadiisa, basle lama sheegin qiimaha uu ku kacay dhismahaasi iyo dhaqaallaha ku baxay meelaha uu ka kala yimi.
Sidoo kale waxa furintaanka munaasibada xadhiga lagaga jaray Dhismaha cusub ee Komishanka ka hadlay Afhayeenka Komishanka doorashooyinka Maxamed Axmed Xirsi (Geelle), Wasiirka warfaafinta Boobe Yuusuf Ducaale iyo sarkaal ka tirsan safaaradda Maraykanka ee Kenya oo isagu ku hadlayay magaca gudida qaadhaan-bixiyeyaasha Somaliland ka taageera geedi socodka Dumuqraadiyadda.
Madaxweyne xigeenka Somaliland C/raxmaan Ismaaciil Saylici, ayaa geba-gebadii xafladaa Shahaado sharafyo gudoon siiyay Gudida qaadhaan-bixiyeyaasha caalamka oo uu sheegay inay ku mutaysteen kaalintii ay ka geysteen afartii doorasho ee ka qabsoomay Somaliland.
Boqor Buur-madaw Oo Fariin Uu Xabsiga Kasoo Tebiyay Ku Sheegay Inuu La Yaabay In Lagu Daro Liiska Madaxdhaqameedka Lagu Casuumay Shirka, Kuna Celiyay Inaanu Kusoo Laabanayn Maxkamadda